Yini iPompo yokuDreda futhi Isebenza Kanjani? - Ama-Ellicott Dredges
Uyini Iphampu Yokubulala
Iphampu yedreyithi yimpompo evundlile ye-centrifugal futhi ukushaya kwenhliziyo kwe-dredge. Idizayinelwe ukuphatha izinto zokwakha eziyimbudumbudu eziqinile nolusayizi olinganiselwe ekumisweni. Ngaphandle kwempompo ye-dredge, i-cutter suction dredge ngeke ikwazi ukuhambisa i-slurry.
Iphampu yedreyini yakhelwe ukuthatha indle, imfucumfucu, nezinye izinto eziyingozi ezisuka phansi ziye epayipini lokumunca, zihambise leyo nto endaweni yokukhipha ngepayipi. Iphampu kufanele likwazi ukuphatha izingcezu eziqinile ezijwayelekile zosayizi abahlukahlukene abakwaziyo ukudlula kupompo, ukunciphisa isikhathi sokuphumula esidingekayo ekuhlanzeni.
Asebenza kanjani amaphampu we-dredge?
Iphampu yedredge iqukethe ikhebula lepompo kanye nempepho I-impeller ifakwe ngaphakathi kwesikhala sepompo futhi inamathiselwe emotweni yokushayela nge-gearbox nakushaft. Ingxenye engaphambili yesigaxa sepompo ivaliwe kusetshenziswa ikhava yokudonsa, ixhuma ngqo kwipayipi lokudonsa le-dredge. Ukukhishwa kwephampu yedredge kubekwe eduze kwaphezulu kwepompo yokudonswa futhi kuxhunywe kulayini ohlukile wokukhipha.
I-impeller ibhekwa njengengqamu yepompo ye-dredge futhi iyafana nefeni ephoqa umoya ukuthi wakhe amandla wokudonsa we-centrifugal. Epayipini lokumunca, lo mshini ubamba i-slurry bese uhambisa izinto ngepayipi lokukhipha.
Dredge Pump Izici
Amashuni okusika we-cutter afakwe kahle ngepompo lokufaka elifakwa phakathi nendawo elinomthombo wokufakwa kwalo otholakala noma ngaphansi komugqa wamanzi ukuze kukhiqizwe eminye imisebenzi futhi kube lula ukusebenza kahle kokudla.
Iphampu ye-dredge yenzelwe ukuhambisa umthamo omkhulu we-fluid noketshezi.
Ezimweni ezifanele, iphampu ye-dredge ikwazi ukukhiqiza ukushesha kwe-fluid okukhulu kunejubane lesakhi sayo esisheshayo.
Amamodeli athile angakhiqiza izingcindezi zokukhipha amandla afinyelela ku-260 ft. (80 m) yekhanda.
Ukusebenza kwepompo ye-dredge kungabikezelwa, yize kunephethini lokugeleza kwangaphakathi okuyinkimbinkimbi.
Ukukhetha i-Pred Dumpge
Ama-dredges amaningi ajwayelekile aklanywe futhi afakelwa ipompo losayizi ofanelekile wokufeza ibanga lokukhiqiza eliphelele Ezimweni lapho usayizi wepompo nohlobo kungachazwanga, kufanelekile ukubheka lezi zinto ezilandelayo lapho ukhetha ipompo lokwehla nokwakhiwa: uhlobo nobukhulu be impahla ezokhishwa, noma ngabe kudingeka udizili noma amandla kagesi, injini ye-HP (kw) iyadingeka, idatha yokusebenza kwepompo, ukuqina, ukulondolozwa kalula, kanye nobude besikhathi sokuphila ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokusebenza, zonke izimfanelo ezibalulekile kunqubo yokukhetha. Okubaluleke ngokulinganayo ukufanisa usayizi ofanele wepayipi nokwakheka ukugcina ukuhamba kahle kwezinto ngaphandle kokuvala ipayipi kanye nokugcina ukukhiqizwa okupompa okudingekayo ukuqeda umsebenzi.
I-Ellicott Dredges, LLC inikezela umugqa wayo wamaphampu we-dredge enzelwe ukusebenza kahle kusihlahla ngasinye se-cutter suction dredge futhi afakazelwe ezinhlobonhlobo zezicelo emhlabeni wonke ukuthi athembekile kakhulu ekuthuthiseni izinto zokwakha ezinomswakama neziningi.